Забур 118 CARS - Nnwom 118 AKCB
1Monna Awurade ase efisɛ oye,
2Momma Israel nka se,
“Nʼadɔe wɔ hɔ daa.”
3Momma Aaronfi nka se,
4Momma wɔn a wosuro Awurade nka se,
5Mʼahohia mu, misu frɛɛ Awurade;
ogyee me so, na ɔma me dee me ho.
6Awurade ne me boafo; enti merensuro.
Dɛn na onipa betumi ayɛ me?
7Awurade ne me wɔ hɔ; ɔyɛ me boafo.
Mede nkonimdi bɛhwɛ mʼatamfo.
8Eye sɛ yebehintaw wɔ Awurade mu,
sen sɛ yɛde yɛn ho bɛto onipa so.
9Eye sɛ yebehintaw Awurade mu,
sen sɛ yɛde yɛn ho bɛto mmapɔmma so.
10Amanaman no nyinaa twaa me ho hyiae,
nanso Awurade din mu mitwitwaa wɔn gui.
11Wotwaa me ho hyiaa wɔ baabiara,
nanso Awurade din mu, mitwitwaa wɔn gui.
12Wɔkyere guu me so sɛ nnowa,
nanso wɔhyew ntɛm so sɛ nsɔe a ogya atɔ mu;
Awurade din mu mitwitwaa wɔn gui.
13Wosum me kɔɔ mʼakyi a anka mereyɛ ahwe ase,
nanso Awurade boaa me.
14Awurade yɛ mʼahoɔden ne me bammɔ;
wayɛ me nkwagye.
15Osebɔ ne nkonimdi
gyigye wɔ atreneefo ntamadan mu se,
“Awurade nsa nifa ayɛ nneɛma akɛse!
16Wɔama Awurade nsa nifa so;
Awurade nsa nifa ayɛ nneɛma akɛse!”
17Merenwu, mmom mɛtena ase
na mapae mu aka nea Awurade ayɛ.
18Awurade atwe mʼaso dennen,
nanso onyaa me mmaa owu ɛ.
19Bue trenee apon ma me;
na mɛhyɛn mu na mede aseda ama Awurade.
20Awurade ponkɛse ni;
ɛhɔ na atreneefo bɛfa ahyɛn mu.
21Mɛda wo ase, efisɛ wugyee me so;
na woayɛ me nkwagye.
22Ɔbo a adansifo no poe no,
23Awurade na wayɛ eyi,
na ɛyɛ nwonwa wɔ yɛn ani so.
24Nnɛ yɛ da a Awurade ayɛ.
Momma yɛn ani nnye na yenni ahurusi.
25Awurade, gye yɛn nkwa;
Awurade, ma yɛn nkonimdi.
26Nhyira ne nea ɔnam Awurade din mu reba.
Yehyira wo fi Awurade fi.
27Awurade yɛ Onyankopɔn,
na wama ne hann ahyerɛn yɛn so.
Momfa nnua mman nkura na yɛnto afɔrebɔ santen
nkɔ afɔremuka no mmɛn ho.
28Woyɛ me Nyankopɔn na meyi wo ayɛ;
wone me Nyankopɔn na mɛma wo so.
29Monna Awurade ase, efisɛ oye;
AKCB : Nnwom 118